Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fikarohana momba ny homamiadana sy COVID: Ny anjara asan'ny cytokines
Taorian'ny lahateny fanokafana manainga fanahy, “Future Perspective of Cancer Immunotherapy”, nomen'ny Prof. Tasuku Honjo nahazo ny loka Nobel sy nahazo ny loka Tang tao amin'ny Federasiona faha-14 Asia Pacific of Pharmacologist Conference (APFP) tamin'ny 26 Novambra, ny 2020 Tang Prize Laureate's Lecture for Biopharmaceutical Ny Science, izay nokarakarain'ny Tang Prize Foundation sy The Pharmacological Society any Taiwan, dia natao tao amin'ny APFP faha-14 tamin'ny 1:30 tolakandro (GMT+8) tamin'ny 27 Novambra.
Niarahan'ny Dr. Wen-Chang Chang, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Taipei Medical University, sy ny Dr. Yun Yen, mpampianatra tao amin'ny Taipei Medical University, ity fivoriana manokana ity dia nanasongadina lahateny nataon'ny mpandresy telo ho an'ny loka Tang 2020 momba ny siansa biopharmaceutical. , Dr. Charles Dinarello, Marc Feldmann, ary Tadamitsu Kishimoto, manome fampahalalana sarobidy momba ny anjara asan'ny cytokine amin'ny areti-mifindra sy ny aretina COVID-19 ary koa ny fitsaboana azo atao.
Ny lahateny voalohany nataon'ny Dr. Dinarello, mitondra ny lohateny hoe “Interleukin-1: Ny mpanelanelana voalohany amin'ny fivontosana rafitra sy eo an-toerana”, dia nanomboka tamin'ny fanadiovana ny pryogen leukocyte avy amin'ny sela fotsy olombelona tamin'ny 1971. Enin-taona avy eo vao nahita tazo roa izy. mamokatra molekiola, nantsoina tatỳ aoriana hoe IL-1α sy IL-1β. Tamin'ny 1977, ny vokatry ny fikarohana dia navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences, ary ho an'ny Dr. Dinarello, "izany dia dingana lehibe teo amin'ny tantaran'ny biolojia cytokine", satria maro ny olona eo amin'ny sehatry ny siansa momba ny fiainana no namporisika ny mianatra ny fiantraikan'ny hery fiarovana amin'ny physiologie olombelona. Vokatr'izany dia nitombo haingana ny biolojia cytokine. Niresaka momba ny fomba taorian'ny fanandramana voalohany tamin'ny olombelona ihany koa izy, "niova be ny tantaran'ny cytokines ampiasaina ho fitsaboana", ary ny fifantohana dia navadika ho "cytokine manakana, toy ny IL-1, toy ny TNF, toy ny IL- 6.” Mba hanampiana ny mpihaino hahatakatra ny tambajotra sarotra ateraky ny molekiola pro-inflammatoire ao amin'ny fianakaviana IL-1, Dr. Dinarello dia namelabelatra momba ny fampitana famantarana ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana IL-1, ny toetrany manohana sy manohitra ny inflammatoire, ary ny soritr'aretina. aretina mamaivay samihafa, mba hanamaivanana ny fomba ahazoan'ny mpanatrika fahatakarana araka ny tokony ho izy ny tapany faharoa amin'ny lahateny izay nifantoka tamin'ny “fampiharana ara-pitsaboana ny sakana Il-1”. Ny famokarana be loatra ny IL-1, araka ny nomarihin'ny Dr. Dinarello, dia antony mahazatra ny aretina maro. Ny IL-1Ra kosa dia afaka manakana ny Il-1αandβ, ary manakana ny famantarana IL-1R. Anakinra, IL-1Ra olombelona recombinant dia novokarina. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana arthritis rheumatoid ary afaka misoroka ny aretina glycemika amin'ny diabeta karazany 2. Ankoatr'izay, ny canakinumab, antibody anti-IL-1βmonoclonal izay novolavolain'i Novartis, dia nankatoavina tamin'ny aretina isan-karazany, manomboka amin'ny aretina manaranaka tsy fahita firy, aretina rheumatic, autoimmune ary aretina mamaivay, mankany amin'ny aretim-po. Ny vaovao mampientanentana indrindra momba ny canakinumab dia ny fitsapana klinika, CANTOS, izay nanaporofo tsy nampoizina fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fitsaboana homamiadana ny canakinumab. Noho izany, mino ny Dr. Dinarello fa ny fanakanana ny IL-1 dia mety hampiditra ny fiandohan'ny fitsaboana homamiadana vaovao.
Ny mpandahateny faharoa, Dr. Feldmann, dia nizara ny fomba fijeriny momba ny "Fandikana ny Molecular Insights amin'ny Autoimmunity ho fitsaboana mahomby." Ny fanamafisana ny tapany voalohany tamin'ny lahateniny dia ny fomba nahitany fa ny anti-TNF dia mety hahomby amin'ny fitsaboana ny arthritis rheumatoid. Ny fitantanana ny fatra avo na ambany amin'ity zava-mahadomelina ity dia afaka manakana ny TNF ary mampihena haingana ny famokarana mpanelanelana hafa. Tamin'ny andrana nataon'izy ireo teo aloha, Dr. Feldmann sy ny ekipany dia naneho fa manodidina ny 50% amin'ny olona voan'ny arthritis rheumatoid dia namaly ny fitsaboana mitambatra amin'ny fampiasana anti-TNF sy ny methotrexate fanafody homamiadana. Izany no nahatonga azy hino fa “mbola lavitra ny lalantsika vao sitrana ny marary rehetra”. Nandritra ny tapany faharoa tamin’ilay lahateny, dia nampahafantatra antsika ny Dr. Feldmann fa “Misaintsaina tena tsy mahazatra ny TNF, satria manana tanjona roa samy hafa izy: TNF receptor-1(TNFR1), izay mitondra mamaivay, ary TNF receptor 2, izay manao ny tena mifanohitra. Ka raha sakananao daholo ny TNF dia sakananao ny mpandray. Manakana ny areti-maso ianao, nefa misakana ny ezaka ataon'ny vatana hanalefahana ny areti-maso. " Noho izany, izy sy ny mpiara-miasa aminy dia "eo am-pamokarana fitaovana" ary efa nanakana ny TNFR1 tsy misy fanovana ny asan'ny sela T mifehy. Ankoatra izany, ny Dr. Feldmann dia nanonona ny mety hisian'ny anti-TNF amin'ny fiatrehana ny filàna ara-pitsaboana maro tsy voavaly, toy ny fitsaboana ny fibrosis amin'ny tanana amin'ny fampidirana anti-TNF amin'ny palmie. Na izany aza, nasongadiny ireo fatiantoka roa miharihary amin'ny anti-TNF novolavolainy voalohany: lafo vidy ary "fanafody azo tsindrona." Noho izany, ny famolavolana "fanafody mora vidy kokoa azo aterina amin'ny vava" dia hitondra tombontsoa lehibe kokoa ho an'ny fiaraha-monina. Nandritra ny lahateny, Dr. Feldmann dia tsy nitsahatra nitondra olona maro niaraka taminy na niara-niasa taminy tamin'ny tetikasa sy andrana samihafa, raha nanandrana nitondra an-trano ny hafatra izy fa ny zavatra nianarany avy amin'ireo traikefa ireo dia "ny fomba fiasa mahomby amin'ny hafa" mba hiantohana ny fandrosoana mitohy amin'ny fikarohana ataony. Nampiavaka ny asany ny fitadiavana “olona manan-talenta hiara-miasa”, ary, “miaraka amin’izy ireo”, hahavita zavatra betsaka kokoa “mihoatra noho izay vitantsika irery”.
Nanolotra ny lahateny fahatelo momba ny lohahevitra "Interleukin-6: Avy amin'ny Arthritis ka hatramin'ny CAR-T sy COVID-19", Dr. Kishimoto dia nisarika ny sain'ny mpanatrika ny fomba nahitana ny IL-6, ny antony mahatonga ny IL-6 ho molekiola pleiotropika, ary nahoana IL-6 "dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana antibody ary koa ny fampidiran-drivotra." Izy koa dia nanazava ny fiantraikan'ny IL-6 amin'ny aretina autoimmune sy ny fomba ahafahan'ny IL-6 miteraka tafio-drivotra cytokine. Tany am-piandohan'ny lahateniny, Dr. Kistimoto dia nanambara mazava fa ny famokarana be loatra ny IL-6 dia hita fa misy ifandraisany amin'ny aretina maro, toy ny myxoma cardiac, ny aretin'i Castleman, ny arthritis rheumatoid, ary ny fiandohan'ny arthritis idiopathic juvenile (JIA). Mba hiadiana amin'ireo valinteny mamaivay nateraky ny famokarana be loatra ny IL-6, Dr. Kishimoto sy ny ekipany dia nanandrana nitsabo marary tamin'ny fanakanana ireo famantarana IL-6. Avy eo, tocilizumab, antibody monoclonal receptor anti-IL-6 recombinant, dia novolavolaina soa aman-tsara ary nekena ho ampiasaina any amin'ny firenena 100 mahery amin'ny fitsaboana ny arthritis rheumatoid sy JIA. Mikasika ny fomba fitantanana ny famokarana IL-6 sy ny antony mahatonga ny famokarana be loatra ny IL-6 amin'ny aretina mamaivay mitaiza, dia nanazava ny Dr. Kishimoto fa ny fanamafisana ny IL-6 dia miankina tanteraka amin'ny RNA mpitondra hafatra. Mba hamonjena ireo marary mijaly amin'ny tafio-drivotra cytokine vokatry ny sela CAR-T, maro amin'ireo mpitsabo amin'izao fotoana izao no hampiasa tocilizumab mba hanamaivanana ny voka-dratsin'ity fitsaboana ity. Raha jerena io ohatra io, ny Dr. Kishimoto sy ny ekipany dia nanombatombana fa ny tocilizumab dia mety hahomby amin'ny fanampiana ireo marary COVID-19 marary mafy miady amin'ny tafio-drivotra cytokine. Fitsapana klinika marobe marobe no nanaporofo fa afaka mampihena ny mety hisian'ny fidiran'ny rivotra na ny mety ho faty. Noho izany antony izany, ny US Food and Drug Administration ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia samy namoaka fanomezan-dàlana hampiasa vonjy maika ho an'ny tocilizumab amin'ny fitsaboana ny marary COVID-19. Tamin'ity lahateny ity, Dr. Kishimoto dia nanome antsika topimaso feno momba ny fikarohana momba ny IL-6 izay notarihiny ny ekipany nandritra ny 50 taona lasa. Dia dia nitondra azy ireo avy amin'ny fikarohana fototra ho amin'ny fampandrosoana ny zava-mahadomelina sy ny fampiharana klinika.
Ireo lahateny telo nataon'ireo nahazo ny loka Tang 2020 momba ny siansa biopharmaceutical dia havoaka voalohany ao amin'ny fantsona YouTube Tang Prize manomboka amin'ny 4 ora hariva ka hatramin'ny 7 hariva (GMT+8) ny 27 Novambra.